Lash Glue 010 | CATRICE COSMETICS
မျက်တောင်တုလေးများကို နာရီများစွာ မကွာထွက်စေဘဲကြာရှည် ခံစေသည်။
The Lash Glue keeps false lashes in place for hours. The slanted applicator allowsaparticularly accurate application of the lash glue. No unwanted dripping and without annoying glue residues when you remove the false lashes.
မျက်တောင်ကပ်ကော် ကမျက်တောင်တုများကို နာရီအတော်ကြာ စွဲမြဲစေပါသည်။ အဖျားရှူးသွားသောကော်ဗူးထိပ်ကလေးက မျက်တောင်တုကိုကော်ကပ်ရာတွင် တိကျသေသပ်စေပါသည်။ မလိုအပ်သောနေရာများသို့ပေကျံခြင်းမရှိစေပါ။ မျက်တောင်တုကိုခွာလိုက်ရာတွင်လဲ ကော်များကပ်ကျန်ခဲ့ခြင်းမရှိစေပါ။
သတိပေးတားမြစ်ချက်။ Glue ကို ထိခိုက်နီမြန်းလွယ်သည့်အသားအရေပေါ် အသုံးမပြုရ။ မျက်ဝန်းအနီးတ၀ိုက်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မျက်လုံးထဲဝင်သွားပါက ရေအေးနှင့်အမြန်ဆေးကြောပစ်ပါ။ ကလေးသူငယ်များနှင့် ခပ်ဝေးဝေးထားပါ။ အသားအရေ နီမြန်းကျိန်းစပ်မှုဖြစ်ပါက ဆေးဝါးကုသမှု ချက်ချင်း ခံယူပါ။